Asụ ụfụfụ - Henan Kol Research Keming Mechanical Co., Ltd.
asụ ụfụfụ ngwa
Ụfụfụ ihe, a makwaara dị ka aircrete, foamed ihe, foamcrete, cellular fechaa ihe ma ọ bụ belata njupụta ihe, na a kọwara dị ka a cement dabeere slurry, na a kacha nta nke 20% (kwa olu) ụfụfụ entrained n'ime plastic ngwa agha.  Ka ukwuu n'ime dịghị Ntụ nchịkọta na-eji maka mmepụta nke ụfụfụ ihe ziri ezi okwu ga-akpọ ngwa agha kama nke ihe; ọ nwere ike na-akpọ "foamed cement" dị ka mma. The njupụta nke ụfụfụ ihe na-emekarị dịgasị si 400 kg / m³ na 1600 kg / m³. The njupụta a na-ejikarị na-achịkwa n'ọnọdụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ akụkụ nke ezi nchịkọta na ụfụfụ.
Foamed ihe a na mejupụtara a slurry nke ciment na ofufe uyi ma ọ bụ ájá na mmiri, ọ bụ ezie na ụfọdụ suppliers nwere ike ikwu dị ọcha ciment na mmiri na-asụ ụfụfụ gị n'ụlọnga maka nnọọ fechaa mixes. Nke a slurry bụ n'ihu weere na a sịntetik aerated ụfụfụ na a ihe Ịgwakọta osisi. Ụfụfụ na-kere iji a na-asụ ụfụfụ gị n'ụlọnga, weere na mmiri na ikuku si a generator. The na-asụ ụfụfụ gị n'ụlọnga na-eji ga-enwe ike ịmị ikuku egosipụta na a elu larịị nke kwụsiri ike, na-eguzogide ọgwụ na-ahụ na chemical Filiks nke agwakọta, ịtụkwasị na-ekwesi.
Foamed ihe ngwakọta nwere ike wụsara ma ọ bụ pumped n'ime Ebu, ma ọ bụ kpọmkwem n'ime bughi ọcha. Ụfụfụ na-enyere ndị slurry ndiwet kpamkpam n'ihi na thixotropic omume nke ụfụfụ egosipụta, ikwe ka ọ bụrụ mfe wụsara n'ime họọrọ n'ụdị ma ọ bụ mould.The viscous ihe onwunwe na-achọ ka 24 awa iji mee (ma ọ bụ dị ka obere ka awa abụọ ma ọ bụrụ na uzuoku gwọrọ na okpomọkụ ruo 70 ° C na mee ngwangwa usoro.), dabere na variables tinyere ihere okpomọkụ ma na iru mmiri. Ozugbo sikwuo ike, kpụrụ mepụtara nwere ike ẹkesiode ya chọọ.
Foamed ihe ike-emepụta na-akọrọ densities nke 400 na 1600 kg / m³, na 7-ụbọchị eme nke mkpokọta 1 10 N / mm² karị. Ụfụfụ ihe bụ ọkụ na-eguzogide ọgwụ, na ya kwes na acoustical mkpuchi Njirimara-eme ka ọ ezigbo maka a dịgasị iche iche nke nzube, si egbochi ihe ala na ụlọ, ka ndum ndochi. Ọ bụkwa karịsịa bara uru n'ihi ékpè a nabata.
A ole na ole nke ngwa ụfụfụ ihe bụ:
precast mgbidi ọcha / ogwe
igba-in-situ / nkedo na-ebe mgbidi
-egbochi ihe akwụ ụgwọ na-ebikwasị
mkpuchi n'ala screeds
mkpuchi ụlọ screeds
aba ime òkè ejuputa
miri dọrọ nabata
sub-isi ke okporo ụzọ awara awara
na-ejuputa of oghere nkanka
prefabricated mkpuchi mbadamba
Ụfụfụ ihe bụ a vasatail ewu ihe owuwu na a mfe mmepụta usoro na dịtụ ọnụ tụnyere autoclave aerated ihe. Ụfụfụ ihe ogige tinye n'ọrụ ada uyi na slurry mix dị ọnụ ala karịa ka, na nwere obere gburugburu ebe obibi mmetụta. Ụfụfụ ihe na-emepụta na a dịgasị iche iche nke densities site na 200 kg / m³ ka 1,600 kg / m³ dabere na ngwa. Mkpa ọkụ njupụta ngwaahịa nwere ike a ga-ebipụ n'ime dị iche iche nha. Mgbe ngwaahịa a na-ewere a ụdị ihe (na ikuku egosipụta dochie nchịkọta), na ya elu kwes na acoustical egbochi ihe àgwà ka ya a dị nnọọ iche na ngwa ka ot ihe.
Adịbeghị anya na ọnọdụ na mmepe
Ruo mgbe a afọ iri gara aga, ụfụfụ ihe e weere dị ka adịghị ike ma na-abụghị inogide na elu shrinkage e ji mara. Nke a bụ n'ihi na ejighị n'aka ụfụfụ egosipụta rụpụtara ụfụfụ ihe enwe Njirimara ekwesighi ka na-amị nnọọ ala njupụta (erughị 300 kg / m³ akọrọ njupụta) nakwa dị ka ibu-agba bughi ngwa. Ọ bụ ya mere mkpa iji hụ na ikuku entrained n'ime foamed ihe na-dị na mụ na n'otu oge ahụ dị nnọọ obere edo egosipụta na-anọgide na-emebibeghị ma dịpụrụ adịpụ, na adịghị otú dịkwuo permeability nke ciment tapawa n'etiti voids.
Mmepe nke sịntetik-enzyme dabeere asụ Ụfụfụ mmadụ, ụfụfụ kwụsie ike ime admixtures na pụrụ iche ụfụfụ amụba, agwakọta na pumping ngwa mma na kwụsie ike nke ụfụfụ na ya mere ụfụfụ ihe, na-eme ka o kwe omume Nlụpụta dị ka ìhè dị ka 75 n'arọ / m³ density.The enzyme mejupụtara ukwuu n'ọrụ na-edozi nke biotechnological si na-adịghị nke dabeere na-amaghị mma protein hydrolysis.In adịbeghị anya foamed ihe e ji mee ọtụtụ ke okporo ụzọ awara awara, azụmahịa ụlọ, ọdachi ghara ịgbanwe ụlọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ụlọ ndị na na mba ndị dị ka Germany, USA, Brazil, Singapore, India, Malaysia, Kuwait, Nigeria, Botswana, Mexico, Indonesia, Libya, Saudi Arabia, Algeria, Iraq na Egypt.